Resaky ny mpitsimpona akotry : valy fingika fingaka | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : valy fingika fingaka
“Miainga any ê !”. Samy miandriandry daholo maheno an’izay “morsa” fampitampitan’ny mpiara-miasa raha vao mitsidika any lavitra any ny patirao na ny iray amin’ireo mpanara-maso mpisafo ny asa. Tsy izay anefa ny voalaza an’ity fanaraina ity, fa ny filazana na fampitandremana mihitsy ny fitsokan’ny rivotra vaovao. Asa na efa ela niaretana ny fitapitaky ny mpanao pôlitika ny vahoaka ka izy indray izao no maneno sahona any amin’ny tsy ampoizina. Ripadripaka ireo noheverina ho kalaza tompondaka eo amin’ny sehatra pôlitika any ivelany any. Izao vao tazana miteny ny tena izy ny demôkrasia. Ny vahoaka no mifehy mivantana matetika araky ny vokatra dia mitsipaka ny mpandrebireby mihevitra azy ho tompon-toerana maharitra. Daka fandroahana no nisedran’ny sasany amin’izy ireo toy ny tany Frantsa. Rivotra vaovao io, tsy maintsy hitsoka aty amin’ny tanàna. Ny hany fotsiny tsy fantatra fotsiny dia rahoviana ? Efa mibitabitaka mialoha sahady ireo manantena ny fitrangan’izany. Diso fiheverana anefa ny maro raha manantena ny fahatongavan’
izany toy ny fisehoana fahagagana. Tompon’andraikitra
amin’ny fivadiky ny toe-draharaha eto amin’ny firenena ny tsirairay. Ity hoe vahoaka ity izay am-bava samy misarika ho izy tsy mandeha ho azy amin’izao raha tsy samy mirotsaka ao anatiny ny olom-pirenena rehetra eo amin’ny fandraisana adidy. Raha samy hiangalangalana daholo eo am-piandrasana, ny sasany hamadika ny fotaka tsy hisy ilay fiovana andrasana. Io fiovana io anefa tsy tafa raha tsy miatomboka amin’
ny fanadiovana ny rivotra pôlitika. Ity rivotra ity kosa tsy hitsahatra ny haloto raha tsy fahaizina ireo mpilalao ao anatin’io sehatra io amin’ny fampitsaharana ny asa maloto fahazarany. Fomba tokana no ahafahana manatanteraka izany dia ny fanongotana ireo efa tsapa ny maha maramara saina azy. Efa nandramana fa hita tamin’ny vokany ny tsy fahombiazany, izy na voky sy natavy ny firenena anefa izao nikoroso izao ary ny vahoaka latsaka ao anaty ety.
Tsy ny fandidiana ity no sarotra araky ny fiteny fa ny safidin’ny tsirairay eo amin’ny fanendrena ny mpandidy amin’
ny alalan’ny fifidianana no manahirana. Eo ihany anefa ny tompon’ny fanapahana ny vahoaka voalaza ho loharanon’ny fahefana, ka toy ny any ivelany eo no fampisehoana ny di-dohan’ny vahoaka izany ny rehetra. Raha jerena anefa dia ireo fa mirangaranga voalohany ireo hery efa nifandimby toerana omaly sy ankehitriny izay efa hita ny nafitsony ka toy ny eny amin’ny fanaovam-baolina tsy mendrika afa-tsy ny “karatra mena”.